Etu ị ga - esi bụrụ onye na - egbu egbu: ihe ndị ịmara | Igbu egbugbu
Etu ị ga - esi bụrụ onye na - ese egbugbu: ihe ndị ị kwesịrị ịma
Ọ bụrụ na ị na-echetụla otú onye na-eme anwansi maka na onweghi ihe ichoro n’uwa nka karia igba akpukpo aru na-adịgide adịgide site na nka gị, echegbula onwe gị, ebe a ka anyị ga-enye gị usoro izizi ị ga - agbaso iji duzie ọrụ gị.
Will ga-ahụ na ị mụtara otu esi adị onye na-eme anwansi Ọ dịghị mfe ma ọlị ma ọ chọrọ nnukwu mgbalị na ịchụ ihe ụfọdụ iji mee nke ọma. Nke bu eziokwu bu na odighi na igbu egbugbu nwere ike ifu gi nnukwu ihe, ma gi ma onye ahia gi!
1 Mụta ise ihe
2 Na-amụsi ike ma na-eme ihe karia
Mụta ise ihe
O doro anya, ihe mbụ ị ga-amụta tupu ị bụrụ onye na-ese egbugbu bụ ịdọta, ma ọ bụghị naanị nke ọma, mana ọ dị mma. Igbu egbugbu abughi nani na ichoputa ndebiri na akpukpo onye ahia, mana ndi okacha mara nma nwere udi nke ha nke bu ihe di iche ha na ndi ozo na nke na eduga ha ka amara ha na inwe uzo n’onu uzo nke studio ha.
Ọ bụ ya mere, Ọ dị mkpa ọ bụghị naanị na ị nwere ike i copyomi, kama na ị nwere ike iche ezigbo nsogbu ihu dịka ịhazi ibe gị ma mee ka ha dị oke egwu nke na ị ga-ahapụ onye ọ bụla n'ọnụ ha ghe oghe (ee e, aghụghọ nke jiri isii na anọ mee m eserese gị ekwesịghị ya).
Na-amụsi ike ma na-eme ihe karia
Ọ bụ ezie na enweghị ebe ọ bụla nwere ike inye nkwenye gọọmentị maka otu esi eme onye na-ese egbugbu. Bụlagodi, Akwadoro ka ị debanye aha maka usoro iji mejupụta ihe ọmụma ma tinye ya n'ọrụ (dị ka ndị enyi gị dị njikere igbu egbugbu n'efu). Ga-ahụ nkuzi na ebe dị iche iche, ọ bụ ezie na otu n'ime ihe ndị a kwadoro bụ nke bylọ Akwụkwọ Ọchịchị nke Tattoo Masters na-enye, yana ọfịs na obodo dị iche iche ma mepee kemgbe 1984.
Ozugbo ị mụtara ka ị ga-esi bụrụ onye na-ese egbugbu, ụzọ gị anaghị akwụsị, ebe ọ bụ na ị ga-etinye ọrụ gị n'ọrụ. Ihe kachasị mma bụ ịmụ na ọmụmụ ihe masịrị gị tupu ịmalite onwe gị iji mepee nke gị iji mee ka ihe ọmụma gị sikwuo ike.
Anyị nwere olile anya na anyị emeela obi abụọ gị banyere etu ị ga-esi bụrụ onye na-ese egbugbu. Gwa anyị, ị nwere ahụmịhe na mpaghara a? Nwere ike ịkwado otu ụzọ ma ọ bụ ndụmọdụ nye mmadụ? Cheta na ị nwere ike ịgwa anyị ihe ịchọrọ na azịza!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Etu ị ga - esi bụrụ onye na - ese egbugbu: ihe ndị ị kwesịrị ịma
Nnọọ. Edemede mara mma, nke kpuchiri ọtụtụ obi abụọ anyị niile nwere mgbe anyị malitere na nke a. Amalitere m 3 afọ gara aga na usoro ESAP ( https://www.esapmadrid.com/ ) na eziokwu bụ na enwere m afọ ojuju na mkpebi m iduzi ndụ m na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ ndị a.
Zaghachi Pedro V
Achọghị ụdị egbugbu Janel Parrish
Pụtara nke egbugbu alaka alaka, gịnị ka ha na-ese onyinyo ya?